Iyo Apple Watch inoponesa hupenyu hutsva | Ndinobva mac
Haisi yekutanga, uye zvinoita kunge isiri yekupedzisira nguva yekuti isu tinyore chiziviso icho zvinonzi Apple Watch yanga iri chikamu chakakosha che kucherechedzwa kwekusagadzikana mukushanda kwemoyo wedu, nekuda kweiyo yemoyo sensor iyo inoitisa kugara uchiongorora kurova kwemoyo wedu.
Munhu wekupedzisira kuona kuti Apple Watch yakachengetedza sei hupenyu hwake anonzi Gaston D'Aquino, murume ane makore 76 okuberekwa. Pakarepo, iyo Apple Watch yakatanga kukutumira yambiro yemoyo, frequency yaive yakakwirira kupfuura zvakajairwa zvichienzaniswa nezvinyorwa zvavaive nazvo zvemunhu uyu kusvika parizvino.
Gaston aive muchechi muHong Kong paakagamuchira yambiro kubva kuApple Watch yake kuti yaive nekuda kwemoyo wake chiitiko unogona kurwara nemoyo chero nguva, saka akamhanyira kuchipatara kunoongororwa. Kutenda kuApple Watch, Gaston akawana, mushure mekuenda kuchipatara, kuti maviri ake matatu etsinga coronary akavharwa uye iyo yaishanda zvakajairika, yaingova pa10% yekugona kwayo.
Paakasvika kuchipatara, Gaston akataura kuti aive auya nekuti Apple Watch yakanga yamukurudzira kuti aite saizvozvo kuti aongororwe. Chiremba uyo asina hanya akamubvunza kana akange akanaka, izvo Gaston akapindura kuti hongu anga akanyatsonaka. Asi pavakangoita bvunzo dzakasiyana, ivo vakakwanisa kuona kukomba kwenyaya uye kutsvaga mhinduro.
Gaston akataura izvozvo Iwe wagamuchira email kubva kuna Tim Cook maari akagutsikana kugona kunzwa kuti ari kupora sei uye inyaya dzipi sedzake dzinoita kuti Apple irambe ichishanda pamhando idzi dzekushandisa. Mavhiki mashoma apfuura, murume ane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa akaenda kuchipatara nekuti kurova kwemoyo kweApple Watch yake kwakawedzera, achionekwa aine ulcer.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch inoponesa hupenyu hutsva
Iyo Nike + Run Club Audio Cheeers application inovandudzwa paApple Watch